HORDHAC: Juventus VS Atletico Madrid ? Dhamaan rajooyinka Champions League waa mid dhici kara balse Juve tollow ma ciidoodaa u hiilin doonta ? – Gool FM
RASMI: André Silva oo dib ugu laabanaya kooxda AC Milan
“Ciyaartoyda waxay ka baqaan imaatinka kooxda Barcelona, sababa la xiriira Messi” – Rivaldo
RASMI: Liverpool oo ku dhawaaqday in Firmino uu ku soo laabtay tababarka kooxdeeda kahor finalka Champions League
RASMI: Arsenal oo xaqiijisay hadii uu Mkhitaryan ka qeyb galayo finalka Europa League
RASMI: Olivier Giroud oo heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Chelsea
Paris Saint-Germain oo qorsheeneysa inay u dhaqaaqdo saxiixa bar-tilmaameedka tababare Zidane
Juventus oo xiriir la sameysay wakiilada Maurizio Sarri si uu u noqdo badalka Massimiliano Allegri
Vincent Kompany oo ka warbixiyay xilliga uu go’aansaday inuu soo gaba-gabeeyo waayihiisa kooxda Man City
RASMI: Laacibka ku guuleystay abaal-marinta xiddigii xilli ciyaareedka ugu fiicnaa kooxda Manchester City oo la shaaciyey
“Mbappé wuxuu si xoogan u doonayay inuu ku biiro Real Madrid” – Unai Emery
HORDHAC: Juventus VS Atletico Madrid ? Dhamaan rajooyinka Champions League waa mid dhici kara balse Juve tollow ma ciidoodaa u hiilin doonta ?
Bashiir March 12, 2019
( Champions League ) 12 MARSO 2019 kooxda Juventus oo heysata rajo aad u yar oo ah in ay u soo baxaan Champions League ayaa markan garoonkooda ku marti qaadaya kooxda Atletico Madrid lugta labaad ee wareega 16-ka ee tartanka Champions League .
Juventus waxaa waajib ku noqon doonta in ay goolal la timaado misane shabqeeda ay ilaashato , balse weydiinta ayaa ah jabhada macalin Diego Simeoni gool malaga celin karaa?!!
Ronaldo waa shaqsiga ugu muhiimsan ee isha lagu hayo kulanka caawa madama uu yahay midka bad baadin kara Juventus dibna u soo celin kara hanka Cajuusta ee u hanqal taagida koobka dhaga weyne .
Wararka labada koox ka hor ciyaarta :
Alex Sandro ayaa kulankan ku seegaya ganaax kaddib markii uu qaatay sedex caalamad oo jaale , halka Blaise Matuidi uu isna hal jaale u jiro in uu maqnaado kulanka lugta koowaad ee wareega xiga hadii ay ba ka soo baxaan kooxda Madrid.
Dhamaan xidigihii nasiinada qaatay kulan ciyaareedkii Udines ayaa ku soo bilaabanaya kulankan waxaana qeyb ka ah Ronaldo oo aan lugta garoonka soo gilin kulankii guusha ay ka gaareen kooxda Udines .
Joao Cancelo iyo Miralem Pjanic ayaa sidookale qaatay nasiino wanaagsan waxa ayna rajeynayaan in ay ku soo bilowdaan kulankan , halka xidigaha kala ah Juan Cuadrado, Sami Khedira iyo Douglas Costa ay dhamaan seegayaan kulankan .
Emre Can oo qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigay kulamadii ugu dambeeyey ee horyaalka ayaa rajeenaya in loo soo xusho khadka dhexe kulanka lugta labaad ee wareeg 16-ka ee tartanka Champuons League oo ay caawa la ciyaarayaan kooxda Atletico Madrid .
Dhibka ugu weyn ee heysta macalin Diego Simeone ayaa ah dambeedka daafaca bidix waxaana si wadajir ah kulankan dhaawac ugu seegaya xidigaha kala ah Filipe Luis iyo Lucas Hernandez .
da’yarka lagu magacaabo Andres Solano ayaa ku soo bilowday dambeedka daafaca bidix kulankii dhawaan ee horyaalka wallow qeebtii dambe ee kulanka la saaray misane aan loo soo xulan kulanka Champions League , balse daafaca qarowga ah ee Juanfran ayaa laga ciyaar siin doonaa booskaas .
Geesta kale Thomas Partey iyo Diego Costa ayaa labadoodaba ka ganaaxan kooxda Madrid kulankan ay wajahayaan kooxda Juventus , laacibkii hore ee kooxaha Real iyo Bules ee Alvaro Morata ayaa ka hor imaan doono naadigisii hore ee Juventus.
Laacibiinta kala ah Jose Gimenez, Angel Correa iyo Antoine Griezmann ayaa dhamaantoodba seegi kara kulanka lugta koowaad ee wareega xiga hadii ay qataan calaamad jaale ah .
Ogeysiiska Kulanka :
Kulanka : Juventus VS Atletico Madrid ( Champions League )
Goobta : Allianz Stadium
Goorta : 11:00 oo habeenimo
Garsoorka : Bjorn Kuipers (Holand)
Xaqiiqooyinka ciyaaarta :
81% boqolkiiba boqol kooxaha ku soo adkaada lugta koowaad wareega kulamada bugbaxa (2-0 ) iyada oo lagu ciyaarayo garoonkooda waxa ay u gudbayeen wareega xiga 13-ka mida 16-kii dhacdo ee ugu danbeyey taranka Champions League .
Atletico Madrid ayaa marar badan ku wajahday kooxda Juventus tartanka Champuons League balse marna guul kama aysan gaarin ( 1-bareejo iyo 2-qasaaro ) kulamdaa sedexda waxa ay ku sameesay 31-shuut balse marna gool kama aysan dhalin xitaa Juventus .
Atletico Madrid ayaa guul daro la’an ah marka ay wajaheyso koox ka socota Italy inta uu hogaamiyaha u yahay macalin Diego Simeone , 7-jeer oo ay kooxaha reer Italay ay wajaheen shan kamida waa ay badiyeen halka labo kulana ay bareejo galaeen ,waxaa xusid mudan in kula madaas 7-da ah kaliya lowga dhaliyey 1-gool , goolka ayaan yimid ciyaar ay bishii March 2014-kii ay la qaateen kooxda AC milan waxa ayna uga badiyee 4-1 waxaana goolka ka dhaliyey Kaka .
Juventus wexa ay la kulmeen qasaaro labo kulan oo xiriir ah , balse marna ma dhicin in ay qasaraan sedex kulan oo xiriir ah tartanka Champions League .
Kooxda Atletico Madrid ayaa badisay kaliya hal kulan 8-dii kulan ee ugu dambeyey oo ay ku ciyaarto meel aan garoonkeeda aheyn kulamda buga baxa ee tartanka Champions League ( 2-bareejo iyo 5-qasaaro ) guusha kaliya ay gareen waxa ay ka heleen kooxda Bayer Leverkusen ciyaar dhacday bishii Febraayo sandkii 2017.
Safafka macquulka ah ka hor kulanka :
Ogoow Sirta ka dambeysa in Zidane uu dib ugu soo laabto Real Madrid
HORDHAC: Manchester City VS Schalke 04 ? City oo dooneysa in ay xaqiijisato booskeeda wareega xiga ee sideed dhamaadka ee Champios League .